Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguKrisztian
Sibhalisa iindwendwe zethu kwaye sifunde amaxwebhu ekufikeni.
Emva kokuba iindwendwe zethu zihambile, indlu iya kubulawa iintsholongwane
Sibonelela ngejeli yesanitizer yesandla kunye neemveliso zococeko
Indawo yethu ibekwe kumbindi wedolophu yaseDebrecen, uhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka kwiCawe enkulu. Le ndlu inamagumbi amathathu abanzi, ibalcony kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Ngenxa yendawo egqwesileyo yeflethi, zonke izinto ezibonwayo zesixeko zinokufikelelwa ngokulula ngeenyawo okanye ngezithuthi zikawonke-wonke. Iivenkile, iivenkile zokutyela, iindawo zokuthenga zikude ngemizuzu.
Funda iprofayile yethu epheleleyo ngolwazi oluthe kratya. Sijonge ukukubona ♥
Indlu ye-AwesHome iqhutywa lusapho lwethu. Indlu iye yalungiswa ngokupheleleyo ngo-2020 kwaye yafumana ifanitshala entsha. Silinde iindwendwe zethu ezinamagumbi amathathu aneendawo zokungena ezahlukeneyo. Le ndlu ingasetyenziswa ngabantu ukuya kuthi ga kwi-6.
KUBALULEKILE!!! Ngokuxhomekeke kwinani leendwendwe, amagumbi angatshixwa. Singakwazi ukuhlalisa abantu aba-6 kuphela ukuba abantu aba-2 balala ngababini kumagumbi ama-2, okanye abantu aba-2 banokulala ngababini okanye ngokwahlukileyo kwigumbi lesi-3. Amagumbi akakwazi kuthwala iibhedi ezongezelelweyo.
Igumbi ngalinye linebhedi yesofa ephindwe kabini, iwodrophu kunye ne-smart TV. Kubahambi bezoshishino, abafundi kunye ne-digital nomads, i-1 ye-intanethi ye-Gigabit bandwidth kunye nedesika ibonelela ngeemeko ezifanelekileyo zokusebenza. Sinikela ingqalelo ekhethekileyo kucoceko lwendlu, i-sanitizer yesandla kunye nezinto ezahlukeneyo zococeko zibonelelwa. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo. Ukusetyenziswa kwe-dishwasher kunye ne-washer-dryer simahla. Iitawuli, ishampoo, ijeli yeshawa kunye nesomisi enwele zibonelelwa, kunye nekofu kunye neti. Ukufudumeza kuyahlengahlengiswa, akukho moya womoya. Ukupaka ngelishwa kuhlawulwa malunga nesakhiwo (1360 HUF / ngosuku).
Iintsapho, izibini, abahambi bodwa, abahambi ngezoshishino, abafundi, abahambi ngedijithali kunye neendwendwe ezivela phesheya ** bamkelekile ukubhukisha naluphi na usuku lonyaka.
Asinakukwazi ukunceda ngokubhukishela abasebenzi 'iihostele, iitheko zezindlu, amanenekazi' abasebenzi kunye neendawo zokufihla, nceda ungakhe uzame nokuzama. Ucoceko lwendlu, ulwaneliseko kunye nokuzola kweendwendwe zethu kubaluleke kakhulu kuthi, kwaye njengekhondom asifuni ukuphazamisa nabamelwane.
** Asikwazi ukuvalela yedwa
Indlu ye-AwesHome ibekwe entliziyweni ye-Debrecen, kodwa iphawulwe ngoxolo kunye nokuzola. Isixeko sethu, kwelinye icala, siyaxokozela ngeenkqubo ezingcono kuneenkqubo ezingcono kwaye kukho into enokufunyanwa yonke imihla. Ukuba ubhukisha indawo yakho yokuhlala nathi uya kufikeleleka lula kuyo yonke into.
Nokuba ufika ngeentsuku zeveki okanye ngeempelaveki, ulonwabo luqinisekisiwe. Phuma emnyango wendlu kwaye ecaleni kweyona ndawo iphambili yesixeko, ezona ndawo zintle zokupapasha, iindawo zokutyela, iindawo zepati, iikhefi zilindele wena, kunye ne-cinema, indawo yemidlalo yeqonga, ibala lezemidlalo, iHlathi eliKhulu, iibhafu kunye nayo yonke into enokundwendwela. umnqweno osuka kwisixeko sethu.
Iivenkile ezinkulu zikwayimizuzu nje embalwa yokuhamba. Nokuba kukuthenga, ukuzingela iimpahla okanye ukuchitha ixesha elithile, uqinisekile ukuba uyayifumana le nto uyikhangelayo.
Ukuba injongo yohambo lwakho yiYunivesithi yaseDebrecen okanye udliwano-ndlebe lomsebenzi, awuyi kuphoxeka nokuba, kuba kungekhona nje kumbindi wesixeko, kodwa nayiphi na i-faculty yaseyunivesithi okanye umsebenzi ufikeleleka ngokulula kuthi.
Ngenxa yokusondela kukaloliwe kunye nesikhululo sebhasi esimgama omde, unokufikelela ngokulula kwiindawo ezijikeleze iDebrecen. Thatha uhambo losuku olu-1 ukuya eHortobágy, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza okanye eTokaj.
Umbuki zindwendwe ngu- Krisztian
Kubalulekile kuthi ukuba sinikeze uhambo olunoxolo kodwa olunomdla kwiindwendwe zethu. Sizama ukubanceda kuyo yonke into ngaphambi nangexesha lokuhlala kwabo kunye nokusingatha iimfuno zabo ngokubhetyebhetye kangangoko.
Sinxibelelana neendwendwe zethu ngesiNgesi nangesiHungary, sizama ukuphendula ngokukhawuleza kuko konke ukubhukisha kunye nemiyalezo. Umama uyandinceda ukuba ndiqhube indlu, Nguye umamkeli-zindwendwe.
Eyona nto ibalulekileyo kukuba ube nexesha elimnandi eDebrecen, ke sizama ukwenza konke okusemandleni ethu.
Kubalulekile kuthi ukuba sinikeze uhambo olunoxolo kodwa olunomdla kwiindwendwe zethu. Sizama ukubanceda kuyo yonke into ngaphambi nangexesha lokuhlala kwabo kunye nokusingatha iim…
Inombolo yomthetho: MA20005787